Avy amin'ny Archives mpamatsy vola - Fanisana ho an'ny fanjakana
Category Archives: Avy amin'ny mpamatsy vola anay
Ny papa sy ny lamina vaovao - Fizarana II
Ho aiza ny Papa Francis?
Maninona isika no “tsy miverina amin'ny ara-dalàna” intsony.
Filazantsara ho an'ny rehetra
Fa maninona no misy ny Fiangonana? Inona ny iraka hataony eto an-tany? Iray amin'ireo làlana marobe mankany an-danitra fotsiny ve izany? Ary ny fivavahana hafa? Antsoina fotsiny isika mba hikolokolo ny firahalahiana sy ny firahalahiana amin'ny olona hafa sa misy zavatra hafa? Vakio ny Filazantsara ho an'ny rehetra avy amin'i Mark Mallett ao amin'ny The Now Word.
Mivoaka avy any Babylona
Ny ilana fandinihana mafy ny feon'ny fieritreretana.
Ny fianjeran'i Amerika ho avy
Voalazan'ny Baiboly mialoha ve?
Hetsika lehibe amin'ity Fararano ity?
Ny fiaviany mankamin'ny haizina
… Ho Kominista manerantany.
1 2 3 4 5 6 7 Manaraka "